"एम्ब्रेकर EMB-120 मेगा पैक FSX र P3D"
प्रश्न "एम्ब्रेकर EMB-120 मेगा पैक FSX र P3D"
1 वर्ष7महिना पहिले - 1 वर्ष7महिना पहिले #891 by bobrad79
नमस्ते ... मैले माथिल्लो फाइललाई भित्र लगाउनुभयो P3Dv4 तर उपकरणले काम गर्दैन,
मैले स्वत: स्थापना गरे र मेनुअल स्थापनालाई पनि प्रयास गर्यो।
चियर्सले केही शरीरलाई मदत गर्न सक्छ
कसैको मान्छेले अर्को पटक म पछि पछाडि पढ्नेछु समस्या स्थिर THANKS
अन्तिम सम्पादन: 1 वर्ष7महिना पहिले bobrad79.
1 वर्ष3महिना पहिले #1065 by davgál1
शुभ दोहोरो, फोरम:
म यस विमानमा ईञ्जिन सुरूको बारेमा सोध्न चाहान्छु, किनभने हरेक समय मैले यसलाई सुरू गरें, इन्जिनहरूले 10 मिनेटको लागि पूर्ण शक्ति उत्पादन गर्दछ, यसको बावजूद पावर स्तरहरू निष्क्रिय स्थितिमा छन्, साथसाथै शर्त परिस्थिति (पंख)।
म (स्पष्ट रूपमा) वास्तविक सुरुवात प्रक्रियाहरू प्रदर्शन गर्दैन, तर एडसनको PDF बाट प्रक्रियाहरू।
आशा छ तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
1 वर्ष3महिना पहिले #1066 by DRCW
पहिले तपाईंको इन्टरनेट सुरक्षा प्रोग्राम असक्षम पार्नुहोस्, त्यसपछि कार्यक्रम पुन: स्थापना गर्नुहोस्। मलाई थाहा छ कि त्यो काम गर्दछ
1 वर्ष3महिना पहिले #1084 by davgál1
तपाईको जवाफको लागि धन्यवाद।
सकियो, तर यो काम गर्दैन ...
1 वर्ष3महिना पहिले - 1 वर्ष3महिना पहिले #1085 by DRCW
ठीक छ, म यो मेगा पैकमा डाउनलोड गर्नेछु P3D V4 हेर्नुहोस् र के छ र कसरी समाधान गर्न हेर्नुहोस्। म तिम्रो साथ फिर्ता आउनेछु
अन्तिम सम्पादन: 1 वर्ष3महिना पहिले DRCW। कारण: परिवर्तन गर्दै FSX लाई P3D V4
1 वर्ष3महिना पहिले #1086 by DRCW
जब मैले यो सफ्टवेयर डाउनलोड गरें, मैले पढाई सामाग्रीमा उल्लेख गरें, कि थ्रोटलले प्यानलमा उल्लेखित ए पीला राज्यपाल छ, जसले तपाईंलाई माथि 10% N1 को अनुमति दिनेछैन। यो राज्यपाल सुरूवात सक्रिय हुनुपर्दछ र निकासमा नबनाउनु पर्छ। तपाईं यो बारे मा सजग हुनुहुन्छ, र प्रक्रिया पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, यो कोडिंगमा त्रुटि कहाँ हुन सक्छ। तपाईंले पोस्ट गर्नुभयो
1 वर्ष3महिना पहिले #1087 by DRCW
ठीक छ मैले विमान देखेको छु, र वास्तवमा समस्या 2D थ्रेसहोटल प्यानल र परिचालक सुविधा बीच कोडिङ समस्या हो। तपाईले ध्यान दिनुहोस् कि राज्यपाल केवल2D पपअप प्यानलमा मात्र छ, भर्चुअल कलकपिटमा छैन। सुरूवातमा, ईन्धन नियन्त्रण पनि लगाइन्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ भर्चुअल र 2D प्यानलहरू बीचको विवाद हो। तिनीहरू राम्रो खेलिरहेका छैनन्। भर्चुअल प्यानल पूर्वनिर्धारित राजा वायुसँग सम्बन्धित छ P3D। म केहि खेल खेल्दैछु र हेर्नुहोस् कि म के गर्न सक्छु
1 वर्ष3महिना पहिले #1088 by daveh
नमस्ते, मैले भर्खरै यो प्याकेज डाउनलोड गरें FSX। म इमानदारीपूर्वक सोच्दै यो सर्वोत्तम डाउनलोड मध्ये एक हो जुन मैले डाउनलोड गरेको छु! फ्रेम दर अप्रत्याशित छन्, र ककपिट विवरणहरू (2D प्यानल, ग्याज आदि) उत्कृष्ट छन्। राम्रो भयो!